🥇 ▷ Kuwani waxay noqon lahaayeen qiimaha iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11R ✅
Kuwani waxay noqon lahaayeen qiimaha iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11R
Waxaan horeyba u ognahay taariikhda aad soo bandhigtay iyo 90% astaamaheeda. Waxaan sidoo kale awoodnay inaan saadaalinno magaca taleefannada cusub laakiin wali waxaan shaki ku jirnaa madaxdeena… Maxay noqon laheyd iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11R qiimaha?
Waxaan dib u eegeynaa dhammaan wararka xanta ah ee ku saabsan joogsiga cusub ee isla waqti isku mid ah oo aan u dhagno Net si aan u helno tilmaamaha aan ka hayno inta ay kuwa cusubi nagu kici doonaan taleefannada casriga ah Apple. AdigaIPhone 11 wuxuu ka jaban doonaa iPhone XS? Sannadkan iPhone 11R-na wuu ka qaalisan doonaa kan iPhone Xr? Oo muxuu ku saabsanaa wararkaas la isla dhexmarayay ee ah iPhone 11 Pro?
Qiimaha IPhone 11
Qiimaha iPhone 11 ma noqon doono mid ka hooseeya kan iPhone XS, taasi waa hubaal. Apple laguma sifayn karo si toos ah in la soo saaro moodooyin cusub oo ka raqiisan kuwii la soo saaray sanadihii hore iyo, gaar ahaan moodalkeeda “ugu weyn”, ma fileynno in wax isbadal ah lagu sameeyo istiraatiijiyaddan.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan isbeddello waa weyn oo ka baxsan kamaradda iyo processor-ka, ay aad ugu egtahay in Apple go’aansado inuu hayo qiimaha iPhone 11. Sidan ayaa waxaa looga iibsan karaa 999 doolarka Mareykanka iyo 1159 euro dalka Spain. Moodooyinka 256 iyo 512 GB waxay kusii iibinayaan 1329 iyo 1559 euro siday u kala horreeyaan.
Kuwani Qiimaha iPhone 11 waxay la jaan qaadi doontaa daadinta ugu horeysa marka loo eego iibinta taleefannada gacanta oo dhacay bilo kahor. Ka dib waxaa jiray hadal ah in moodallada, iyada oo aan wax xiriir ah la laheyn hawl wadeennada, la iibin doono laga bilaabo $ 999, farqiga ugu weyn ee ah in meesha laga saaro nooca 64 GB ee doorbidaya mid ka mid ah 128.
Haa waxaa jira suurtagal in iPhone 11R uu ka yara jabanyahay kan iPhone XR-da hadda laakiin waxaas oo dhan waxay ku xirnaan doonaan tikniyoolajiyadda cusub ee kamaradaha mobilada. Sikastaba, waxaan filaynaa in iPhone 11R uu ka qaalisan yahay kan hadda socda “iPhone raqiis” ah ee u horseeday inuu noqdo taleefanka ugu wanaagsan ee lagu iibiyo Apple sanadkan.
Marka loo eego iPhone 11 Pro, waxaan leenahay shaki badan. Haddii ay joojiso ugu yeerista lafteeda “Max” waa sababta oo ah waxay ku dari doontaa xoogaa horumar ah oo jidhkaaga ah oo dhaafsiisan kala duwanaanta cabirka. Moodhkan ayaa noqon lahaa wax ka qaalisan iPhone XS Max oo la bilaabay sanadkii hore, kaasoo ka bilaabmay dalka Spain lacag dhan 1259 euro. Qiimeyntan iPhone 11 Pro ayaa laga yaabaa inay ku bilaabato 1299 euro.
Sida iska cad, waxaas oo dhami waa fahanno ku saleysan istiraatiijiyadda Apple sannadihii hore iyo wararka xanta ah ee ka soo baxayay iPhone 11 bilihii la soo dhaafay. Bil gudaheed ayaan ku xaqiijin karnaa kuwan iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11R qiimaha
Qiimaha iPhone XS, XS Max iyo Xr
Kuwani waa qiimaha dhammaan noocyada kala duwan ee iPhone XS, iPhone XS Max iyo iPhone XR xilligii la bilaabay, isbarbar dhiga tirooyinka Yurub (iyo Isbaanish) iyo dhulka Mareykanka.
iPhone XS 64GB: 1159 euro / 999 dollars (859 euro oo iswaydaarsiga)
256GB iPhone XS: 1329 euro / 1149 dollars (988 euro oo la beddelo)
512GB iPhone XS: 1559 euro / 1349 dollars (1160 euro oo sarrifka sarrifka ah)
iPhone XS Max 64 GB: 1259 euro / 1099 dollars (945 euro oo la beddelo)
256GB iPhone XS Max: 1429 euro / 1249 doolar (1074 euro oo iswaydaarsiga)
512GB iPhone XS Max: 1659 euro / 1449 dollars (1246 euro oo la beddelo)
iPhone XR 64GB: 859 euro / 749 doolar (644 euro iswaydaarsiga)
128GB iPhone XR: 919 euro / 799 doolar (687 euro oo iswaydaarsiga)
256GB iPhone XR: 1029 euro / 899 dollars (773 euro oo la beddelo)